साताभरमा नेप्से १०.७५ अंकले बढ्यो, साढे ११ अर्बको कारोबार | NewsKarobar
गृहपृष्ठ साताभरमा नेप्से १०.७५ अंकले बढ्यो, साढे ११ अर्बको कारोबार
साताभरमा नेप्से १०.७५ अंकले बढ्यो, साढे ११ अर्बको कारोबार
साताभरमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १०.७५ अंकले बढेको छ । गत साताभरमा नेप्से ५२.३९ अंकले बढेको थियो ।
कारोबार रकममा खासै अन्तर छैन । गत साताभरमा चार दिनमात्रै कारोबार हुँदा करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएकोमा यो साता ११ अर्ब ५२ करोड २४ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
कुन बार के भयो ?
साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से १० अंकले घट्दा पाँच कम्पनीको मूल्यमा उछाल आयो । उन्नति सहकार्य लघुवित्त, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर, जोशी हाइड्रोपावर, राधी विद्युत कम्पनी र युनिभर्सल पावर कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको थियो ।
आइतबार नेप्से परिसूचक १०.४५ अंकले घट्यो । १९१ कम्पनीको ७० लाख ३८ हजार ९९० कित्ता सेयर २ अर्ब ७८ करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरमा किनबेच भएको थियो । सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ४० करोड १३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भयो ।
त्यस्तै, नेपाल बैंक, नेको इन्स्योरेन्स, अरुण काबेली पावर, शिखर इन्स्योरेन्स, शिवम् सिमेन्ट, नागरिक लगानी कोष, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन डिस्टिलरी र एनआईसी एसिया सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीको सूचीमा परे ।
दोस्रो दिन पनि सेयर बजार बढ्न सकेन । सोमबार नेप्से १२.१७ अंकले घट्यो । कुल १९२ कम्पनीको ५५ लाख ९५ हजार ५५१ कित्ता सेयर दुई अर्ब १६ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा खरिद‑बिक्री भयो ।
कारोबारमा आधारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी २८ करोड ४० लाख रूपैयाँबराबरको कारोबारसहित शीर्ष स्थानमा रह्यो । यस्तै नागरिक लगानी कोषको १५ करोड ६३ लाख, नेको इन्स्योरेन्सको नौ करोड तीन लाख, एनएमबी बैंकको संस्थापक सेयर आठ करोड ८२ लाख, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आठ करोड २४ लाख र शिवम् सिमेन्टको सात करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर किनबेच भयो ।
सोमबार उन्नति सहकार्य लघुवित्त ९.९१, युनिभर्सल पावर कम्पनी ९.८७, जोशी हाइड्रोपावर ८.८६, नागरिक लगानी कोष ७.९४ र आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ७.३३ प्रतिशतले कमाए ।
नेप्सेमा मंगलबार भने हरियाली छायो । मंगलबार नेप्से ७.३५ अंकले बढ्यो । बैंक र होटलबाहेकका सबै उपसमूह उकालो लागे ।
मंगलबार १९० कम्पनीको ४१ लाख ८० हजार ८१६ कित्ता सेयर १ अर्ब ७९ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा किनबेच भयो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, उन्नति सहकार्य लघुवित्त, एनआरएन लघुवित्त र जोशी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढ्यो । चिलिमे हाइड्रोपावर, नागरिक लगानी कोष, मञ्जुश्री फाइनान्स, घोडीघोडा लघुवित्त, आशा लघुवित्त र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स पनि सर्वाधिक मूल्य बढ्ने १० कम्पनीको सूचीमा परे ।
मंगलबार सर्वाधिक नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको २७ करोड ५५ लाख, नागरिक लगानी कोषको १२ करोड २२ लाख र नेको इन्स्योरेन्सको ९ करोढ ९१ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो ।
नेप्सेको वृद्धिले बुधबार पनि निरन्तरता पायो । बैंक र विकास बैंकबाहेकका सबै समूह उकालो लागेपछि नेप्से १३.५ अंकले बढ्यो ।
बुधबार १९५ कम्पनीको ५८ लाख ३१ हजार ११० कित्ता सेयर २ अर्ब ५६ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरमा किनबेच भयो । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर तथा रिलायन्स इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो । त्यस्तै आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सेयर मूल्य पनि ९.३१ अंकले बढेको थियो । नेरुडे लघुवित्त, स्वरोजगार लघुवित्त, सिभिल लघुवित्त, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनआरएन लघुवित्त र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक पनि सर्वाधिक मूल्य बढ्ने १० कम्पनीको सूचीमा परे ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, शिवम् सिमेन्ट, सूर्य लाइफ, नेको इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सबैभन्दा धेरै मूल्यको कारोबार भयो ।
साताको अन्तिम दिन पनि नेप्से बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो । बिहीबार नेप्से १२.४९ अंकले बढ्दा चार कम्पनीको मूल्यमा उछाल आयो । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयर, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट र एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्यो ।
बिहीबार कारोबार बन्द हुँदा नेप्सेको रेखाले १५२०.६९ अंक छोयो । कुल १८९ कम्पनीको ४३ लाख २९ हजार ६६५ कित्ता सेयर २ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरमा किनबेच भयो । बिहीबार पनि नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
पछिल्लाे - भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा विस्तार, ७६ हजारको मृत्यु, कुन प्रान्तमा कति ?
अघिल्लाे - भिजाद्वारा ‘भुक्तानी सुरक्षा रोडम्याप’को सुरूवात